Moto HD 10, hwendefa reAmazon rinovandudzwa rine simba uye rakajeka | Gadget nhau
Amazon Inoenderera mberi kubheja pakutonga demokrasi nhamba yakanaka yezvikamu nezvayo zvigadzirwa, iyi ndiyo nzira iyo kambani yaJeff Bezos yanga ichitangisa zvigadzirwa zvinoverengeka zvinowanzo kubudirira nekuda kwekukosha kwazvo kwemari. Pakati peizvi tine maspika, e-mabhuku uye nemahwendefa echokwadi.
Gara nesu uye uone kuti nei aya mahwendefa asingadhuri eAmazon achiwanzove anotengesa zvakanyanya uye nehunyanzvi hwavo kugona, uri kufarira kuzvitenga here?
Sezvinenge nguva dzose, isu tafunga kuperekedza kuongorora kwedu kwakadzama nevhidhiyo iri yedu YouTube chiteshi, Muvhidhiyo ino iwe unozogona kuona yakakwana unboxing kuti utarise zviri mukati mebhokisi reiyi Amazo Fire HD 10. Ehe, isu tinoitawo bvunzo kune Hardware, kune zvakadzama hunhu uye kunyangwe kune yayo screen uye vatauri vayo, kune izvo vhidhiyo inogona kuve yakanaka inokwenenzvera pakuverenga kweiyi ongororo. Usapotsa uye usiye chero mibvunzo mubhokisi remashoko.
2 Unhu hunhu uye kubatana
3 Inoshanda system uye ruzivo rwevashandisi
4 Multimedia chiitiko
Panguva ino, Amazon yakafunga kusagadzira zvachose, iyo Jeff Bezos yakasimba inogara ichitsvaga dhizaini yakanyanyisa uye zvinhu izvo, kunyangwe zvisingaite kutikwezva nekuda kwekunakisa kwavo, vachazviita nekuda kwekushora kwavo kukuru kurova uye kukwenya. Izvozvowo zvakaitika neiyi Moto HD 10 kubva kuAmazon iyo inodyisa pane ese akasarudzika ekambani michina uye nekudaro inotisiya isu takatenderedzwa kunze kwekupedzisa kuperekedza kushandiswa kwenguva refu, Matte nhema uye zvishoma zvine hasha polycarbonate uye chete iyo nyemwerero logo kumashure kweiyi hombe piritsi nekuda kwehukuru hwayo.
Moto weAmazon HD 10 yadzikira kubva pane yayo vhezheni vhezheni kusvika 465 magiramu
Vipimo: X X 247 166 9,2 mamirimita
Tine kamera yekumashure mukona yekumusoro, nenzira imwecheteyo yekuti muchikamu chepamusoro pane zvese zvinongedzo nemabhatani, chiteshi che USB-C, 3,5 mm Jack chiteshi, mabhatani maviri evhoriyumu uye bhatani remagetsi. Kune chikamu chayo, iyo skrini yepaneru, iyo isina kucherwa, ine dhizaini dhizaini iyo inobatsira kuiswa kwevadziviriri. Tine kamera yemavhidhiyo ekufona iri kuruboshwe kana tichiishandisa yakatwasuka uye muchikamu chepamusoro chepakati kana tikachishandisa chakatwasuka, sezvachinoratidzika kunge chakanangwa.
Unhu hunhu uye kubatana
Muchikamu chino, Amazon haisati yave nemukurumbira nekusanganisira yazvino tekinoroji uye simba rehardware yemidziyo iyi, asi yekuyedza kupa hukama hwakasimba pakati pehunhu nemutengo. Mune ino kesi ivo vaisanganisira processor cores masere pa2,0 GHz uyo mugadziri isu tisingazive, kunyangwe zvese zvichiratidza kuti iri MediaTek zvinoenderana neongororo Iyo RAM inokura kusvika ku3 GB yakazara ichitengesa pane inochengeterwa 32 GB kana 64 GB zvichienderana nemhando yakasarudzwa.
Kubatanidza tine Dual bhendi WiFi 5, iyo yakaratidza kuita kwakanaka mukuwongorora kwedu neese ari maviri 2,4 GHz uye 5 GHz network. Makaralı 5.0 LE qIwe unenge uchinge uchinge uchiona nezvekufambiswa kwenzwi kweasina waya mahedhifoni kana masipika, zvese pasina kukanganwa chiteshi 3,5 mm jack kuti iyi Moto HD 10 inosanganisira mune yayo yepamusoro chikamu.
Kana ari makamera, 2 MP yekamberi kamera uye 5 MP yekamera yekumashure iyo inotibatsira kubuda mumatambudziko, kuverenga magwaro uye ... zvishoma zvimwe.
Inoshanda system uye ruzivo rwevashandisi
Sezvo iwe uchinyatso kuziva, zvigadzirwa zveMoto zveAmazon, angave ari mahwendefa kana akachenjera materevhizheni eTV, ane yakasarudzika vhezheni yeApple inotarisana nevashandisi veAmazon. Tine Fire OS, dura reApple risina Google Play Chitoro, Kunyange zvakadaro, tinogona kuisa maAPK kubva kune chero sosi yekunze yatinoona yakakodzera, sezvo ichizowirirana zvizere. Kune chikamu chayo, iyo Inoshanda Sisitimu haina bloatware kupfuura maAmazon akabatanidzwa ekushandisa uye kuvandudzwa kwayo muhardware kwakanganisa nguva yekufamba zvakanyanya fluidly.
Kune chikamu chayo, isu tine browser iyo inogona kuvandudzwa, iyo iwe yaunogona kukurumidza kutsiva neChrome kana uchida. Uye zvakare, muchitoro chekushandisa cheAmazon tinogona kuwana shanduro dzeNetflix, Disney + uye vamwe vese vatambi vekushambadzira audiovisual zvemukati vanopa. Nekudaro, ini ndinoomerera kuti kuisa maAPK kubva kunekunze zvinyorwa chinenge chisungo, icho pasina chipingaidzo.
Kune rumwe rutivi, iyo piritsi iri mukushandisa iri pachena rinotarisana nekudya zvirimo, verenga, tarisa kana kutarisa mavhidhiyo. Kana zvasvika pakutamba mitambo yemavhidhiyo, tinotanga kuwana mamwe matambudziko ekuita, sezvingatarisirwe kubva pane zvataurwa nezvazvo.
Sezvatakambotaura, isu tinotarisa pane chokwadi chekuti ticha tenga zvemukati, nekudaro zvakakosha kuongorora mashandiro ari kuita aya mabasa eAmazon Fire HD 10. Mune ino kesi, iyo yakasimba inoti yakawedzera kupenya kwechidzitiro ne10% zvichienzaniswa neshanduro yapfuura, chimwe chinhu chinoona nokutendeseka, chichiita kuti chinakidze kushandisa kunze. Nekudaro, hazvireve kuti isu tine kupenya kunonyanya kucherechedzwa, uko kwakawedzera mukushayikwa kweanopikisa-kuratidza zvinhu zvinoreva kuti tinogona kuve nematambudziko muzuva rakazara, chimwe chinhu chisingazove chakajairwa.
Size Screen: 10,1 padiki
Kugadzirisa: 1.920 x 1.200 pixels (224 dpi)
Kana iri kurira, isu tine seti yematauri maviri akaiswa zvakanaka ayo anozopa kuenderana ne Dolby Atmos pamusoro peiyo classic stereo. Ivo vanoshanda zvinopfuura nemazvo uye vanopa ruzha rwakakwana kurira kuti vafarire mavhidhiyo, mafirimu uye mumhanzi.
Kana zviri zvekuzvitonga, pasina kugona mu mAh isu tinogona kukuudza kuti tanga tine mazuva maviri kana matatu ekushandisa zviri nyore, zvichidaro yaro USB-C chiteshi uye yakasanganisira 9W charger iyo maAmazon ane mutsa wakaringana kuisa mubhokisi. Pakazara, kutenderedza maawa gumi nemaviri enguva yechidzitiro.
Isu tinozviwana tiine 10,1-inch piritsi, yakayerwa Hardware pamwe nemutengo wayo uye chinonakidza chinopihwa chakanangidzirwa kunyanya mukudya zvemukati, kungave kubva kumapuratifomu anopiwa neAmazon pachayo kana kubva kune vekunze vanopa. Mutengo waro uchave wakakomberedza 164,99 euros yeiyo 32 GB vhezheni uye 204,99 euros yeiyo 64 GB vhezheni. Kunyange chiri chokwadi kuti mune zvakatarwa zvinopihwa tinogona kuwana zvirinyore mapiritsi akapedzwa pamutengo wakafanana kubva kumafemu akadai saChuwi kana Huawei, iyo garandi uye kugutsikana kunopihwa neAmazon kunogona kutamba chinhu chakakosha mune iyi nyaya. Inowanikwa kubva muna Chivabvu 26 pawebhusaiti yeAmazon.
Yakatumirwa pa: May 26 we2021
Dhizaini uye zvinhu zvinofungidzirwa kuramba
Inoshanda Sisitimu isina bloatware
1GB imwe RAM isipo
Mutengo uchave unonyanya kukwezva mukupa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Moto HD 10, hwendefa reAmazon rinovandudzwa rine simba uye rakajeka